मलेसिया गएका श्रीमान् दश वर्षसम्म नफर्केपछि परिवार चलाउन हरिमाया कुवेतमा – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/मलेसिया गएका श्रीमान् दश वर्षसम्म नफर्केपछि परिवार चलाउन हरिमाया कुवेतमा
काठमाण्डौ – बुवा परदेश जाँदा आमाको गर्भमा रहेको छोरा अहिले १० वर्षको भइसक्यो । आफ्नी आमासँग ‘बुवा खै ? आमा’ भनेर सोध्छ । तर हरिमाया मोक्तानसँग यसको जवाफ हुँदैन ।
स्वदेशमा रोजगारीको अभाव, काम नगरी खान नपाइने परिवारको अवस्था र बढ्दै गरेको उमेरको जिम्मेवारीले विजयलाई परदेशको बाटो डोर्‍याएको हो ।
अहिले आँखै अगाडि हुर्किंदै गरेको आफ्नो दश वर्षे नातिलाई हेरेर लालबहादुर र सुनमाया आफ्नो छोराको झझल्को मेट्छन् । तर छोरा सामने भए जस्तो त कहाँ हुन्छ र ? उहाँहरुका आँखा अझै पनि छोराको प्रतिक्षामा टोलाइरहन्छन् ।
विजय परदेश जाँदा एउटा छोरी जन्मिसकेकी थिइन् । हरिमाया गर्भवती थिइन् । वृद्ध बुवाआमा, गर्भवती श्रीमती र काखे छोरीलाई छाडेर परदेशको लागि हिँड्दा विजयका मात्रै होइन, पुरै परिवारको आँखा रसाएका थिए । तर पनि घरको आर्थिक अवस्था र काँधको जिम्मेवारीले विजयका पाइलालाई रोकेन ।
‘नाति गर्भमा हुँदा नै छोरो मलेसिया गएको थियो, नाति दश वर्षको भइसक्यो छोराको केही अत्तोपत्तो छैन’, निराश बुवाका आँखाबाट आँशुका धारा वर्षन्छन् ।
‘तीन वर्षमा फर्किन्छु भनेर जानुभएको थियो, दश वर्ष भइसक्यो, आजसम्म आउनुभएन’, विजयकी श्रीमतीको रोदन पनि उस्तै छ ।
‘मेरो श्रीमान जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित भएको सुन्न पाइयोस’, विजयकी श्रीमती भगवानसँग कामना गर्नुहुन्छ, ‘जसरी भए पनि मेरो लोग्ने हाँस्दै खेल्दै टुप्लुक्क आँगनमा आइपुगेकोे देख्न पाइयोस् ।’
लामो समयसम्म विजयले फोन नगरेपछि हरिमायालाई परिवार चलाउन धौ धौ भइसकेको थियो । त्यसैले उहाँले आफ्नो श्रीमानसँग म पनि विदेश जान्छु भन्नुभयो । तर विजयले पैसा पठाइदिन्छु कतै पनि जानुपर्दैन भनेर सम्झाएपछि केही समय त हरिमायाको मन हलुको पनि भयो ।
लामो समयसम्म लोग्ने हराए पनि अब त कुरा हुन थालिसक्यो, अब त पैसा पठाउलान् भन्ने आशा पलायो हरिमायाको मनमा । तर त्यो आशा केही महिनामै निराशामा परिणत भयो । केही महिना फोनमा सम्पर्क भएपछि फेरि विजयसँग सम्पर्क नै हुन छाड्यो ।
अहिले हरिमाया कुवेतमा काम गरिरहनुभएको छ । त्यही कमाएको पैसा घर पठाउनुहुन्छ र जसोतसो परिवार चलाइरहनुभएको छ ।
विजयले आफ्नै होटेल खोलेर बसेको भन्ने सुन्नमा आएको हरिमाया बताउनुहुन्छ ।
‘उहाँ मलेसियामै होटेल चलाएर बस्नुभएको र राम्रो कमाइ गरिरहेको भनेर एकजना उहाँकै साथीले भन्नुभएको थियो, अहिले उहाँको साथीसँग पनि सम्पर्क हुँदैन’, हरिमायाले भन्नुभयो ।
समयले जे जस्तो गराए पनि आफ्नो श्रीमानले त्यसरी माया नै मारेर अन्तै बस्न लागेको भन्दा हरिमायाको मनले मान्दै मान्दैन । आफ्नो लागि नआए पनि आफ्ना दुई मुटुका टुक्रा छोराछोरीको लागि भए नि घर आउनुहुन्छ भन्ने आशामा परदेशबाटै दिन गन्दै बस्नुहुन्छ ।
कहिलेकाहीँ घरमा फोन गर्दा छोराछोरीसँग सोध्नुहुन्छ, ‘तेरो बुवाको केही कुरा सुनियो र ?’
यदि विजयकाे बारेमा कसैलाई जानकारी भए फाेन नम्बर ९८०७२३४७४३ मा सम्पर्क गर्न विजयका बुवा आग्रह गर्नुहुन्छ ।